WeVideo: Fanovana sy fiaraha-miasa amin'ny horonantsary an-tserasera | Martech Zone
WeVideo dia lozisialy ho toy ny sehatra serivisy ahafahan'ny mpivarotra mamorona sy mamoaka horonan-tsary an-tserasera. WeVideo dia manome vahaolana mora ampiasaina sy farany ho an'ny fampidinana horonantsary, fanitsiana horonantsary, famoahana horonan-tsary ary fitantanana ireo fananana horonan-tsarinao - izany rehetra izany dia ao anaty rahona, ary azo idirana amin'ny tranokala na tablette na fitaovana finday rehetra.
Vonona amin'ny finday ny horonan-tsary navoaka tamin'ny alàlan'ny WeVideo. Ny WeVideo for Business dia misy koa ny vahaolana finday ho an'ny fitaovana Android sy iOS hahafahan'ireo mpivarotra misambotra horonantsary ary manomboka manitsy eo am-pandehanana.
Amin'ny fanomezana lohahevitra namboarina, WeVideo dia miantoka fa ny horonan-tsary dia manana fomba fijery hita maso, miaraka amin'ny sary famantarana, naoty miloko, ny ampahatelony ambany sy ny fanazavana, ny mpitifitra ary ny mari-drano.
WeVideo dia manohana ny famoahana amina sehatra an-tserasera marobe; avy amin'ny Youtube ary Vimeo (mpiara-miasa izahay), amin'ireo sehatra fampiantranoana video mifantoka amin'ny orinasa, toa Wistia. Ny horonan-tsary dia azo zaraina mora foana amin'ny tranokala media sosialy toy ny Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn ary maro hafa.
Ho an'ny fikambanana mampiasa Google Apps, WeVideo dia manohana ny fidirana amin'ny firafitry ny lahatahiry Google rehefa misoratra anarana ny mpampiasa. Midira ho $ 19.99 isam-bolana (na $ 199.99 mandritra ny herintaona). Manome kaonty roa ny orinasanao hahafahanao miara-miasa amin'ny famoronana horonan-tsary.
Tags: horonantsary fandraharahanagoogle appsvideo collaborationlahatsary fanitsianaapi fanovana videoVimeowistiaYouTube
Tsena fanaovana dokambarotra niomerika nitombo haingana
LinkedIn mandefa fanavaozana tohanan'ny fanohana
Aug 22, 2013 amin'ny 2: 25 AM